Weydii - Sprachschule Dialog
Su'aalaha inta badan la isweydiiyo. Jawaabo cad.
Goorma iyo intee jeer ayaa fasallada la qabtaa?
Koorsooyinkayagu badanaa waxay dhacaan shan jeer toddobaadkii maalmaha shaqada.
Kaliya koorsooyinka fiidkii waxaan mararka qaarkood leenahay 4 maalmood koorso toddobaadkii.
Koorsooyinka subaxda (8:30 a.m. - 12:30 p.m.) 5tii cashar ee ugu dambeeyay maalintii,
koorsooyinka galabta (2:00 p.m. - 5:00 p.m.) 4 cashar maalin kasta iyo
Casharrada fiidkii (6.15 p.m. - 9.30 p.m.) 4 cashar maalintii.
Muddo intee le'eg ayay koorsooyinku soconayaan?
Koorso dhammaystiran waxay ka socotaa heerka bilowga ilaa heerka B1 si xawli caadi ah qiyaastii 7 - 8 bilood (7 modules = 700 saacadood) iyadoo ku xiran waqtiga.
Gaar ahaan, koorsooyinka barbaarinta waxay qaataan qiyaastii 10-11 bilood ilaa heerka B1 (10 modules = 1000 saacadood).
Iyadoo ku xiran natiijada imtixaanka meelaynta, heerka bilowga shaqsiga ayaa waliba noqon kara mid sarreeya. Taas macneheedu waxa weeye in koorsadu sidoo kale noqon karto mid gaaban.
Waa maxay qiimaha koorsadu?
Casharku wuxuu ku kacayaa € 4.5 cashar kasta iyada oo aan la helin maalgelinta BAMF.
Ka qaybgalayaasha maalgelinta BAMF, casharku wuxuu ku kacayaa € 2.2.
Qalinjabiyeyaasha loo oggol yahay inay ka qaybgalaan koorsada is -dhexgalka waxay ikhtiyaar u leeyihiin 50% dib -u -bixinta BAMF haddii ay si joogto ah uga qaybgalaan oo ay u gudbaan imtixaanka B1 iyo koorsada hanuuninta oo ay ku tijaabiyaan Leben gudaha Deutschland 2 sano gudahood laga bilaabo ansaxnimada oggolaanshaha ama waajibaadka
Codsiga ka -dhaafitaanka kharashyada waxaa soo gudbin kara hay'ad ku habboon sida xarunta shaqada iyo wakaaladda shaqada.
Ma jiraan wax taageero ah oo loogu talagalay koorsooyinka?
Muhaajiriinta haysta sharciga deggenaanshaha ee ku habboon waxay xaq u leeyihiin inay ka qayb qaataan koorsada is -dhexgalka sidoo kale waxaa lagu taageeraa xagga dhaqaalaha oo kaliya waa inay bixiyaan € 2.20 casharkiiba.
Haddii koorsadu si joogto ah uga qaybqaadato oo ay si guul leh ugu gudubto imtixaanka B1 iyo imtixaanka koorsada hanuuninta muddo 2 sano gudahood ah laga bilaabo ansaxnimada xaqa ama waajibaadka, ardaygu wuxuu codsan karaa in 50% dib loo bixiyo lacagihii la bixiyay. Si aad tan u samayso, u dir arjigan BAMF boostada diiwaangashan. Fadlan ku soo lifaaq koobiga shahaadada koorsada isdhexgalka.
Haddii ardaygu helo macaashka bulshada sida ALG2 ama kaalmada kirada, waa laga dhaafi karaa kharashaadka markaasna koorsadu waa u BILAASH. Kharashyada safarka ayaa sidoo kale dib loo celin karaa haddii iskuulku u jiro wax ka badan 3 km guriga.
Imtixaanno noocee ah ayaan ku qaadi karaa?
Waxaan si joogto ah u bixinnaa imtixaanno kala duwan heerarka A1 - A2 - B1 - B2 Sabtida;
waxaa xaqiijiyay machadka TELC.
Waa kuwee dukumentiyada loo baahan yahay?
Codsiga waa inaad soo qaadataa kuwan soo socda
Aqoonsigaaga ama baasaboorkaaga hadda,
hadda ALG2 ama ogeysiiska dheefta la midka ah,
heshiiska isdhexgalka ee xarunta shaqada,
warqadda ballanqaadka ee ka timi hay'adda ay khusayso.
Ma jiraan tijaabooyin tijaabo ah oo lacag la'aan ah "Imtixaanka Jarmalka ee soogalootiga A2-B1"?
Haa, waxaa jira tijaabooyin ku -meel -gaar ah oo lacag la'aan ah oo laga soo dejisto iskuxirka soo socda:
Halkeen ka heli karaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan imtixaanka Jarmalka ee soogalootiga A2-B1?
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan imtixaanka Jarmalka ee muhaajiriinta A2-B1 waxaa laga heli karaa xiriirka hoose:
Ma jiraan agab tababar oo loogu talagalay buugaagta ku jira koorsooyinka isdhexgalka guud sidoo kale internetka ama si loo soo dejiyo?
Haa, waxaa jira “Schritte plus” (cusub) oo ka socda Hueber Verlag oo loogu talagalay buugaagta aan fasalka u adeegsanno. https://www.hueber.de/schritte-plus-neu/lernen/uebungen
Waa kuwee buugaagta dugsiga luuqaddu ku isticmaalo koorsooyinka akhris -qorista?
Waxaan isticmaalnaa buugaag ka socda Hueber Verlag iyo agabkeenna oo aan ku bixinno lacag la'aan.